Qaybtii 8aad’ Ee Xog-warankii Yuusuf Garaad” Dhibkii Iyo Tacadigii Dawladii Siyaad Bare u Gaysatay Shacbigii Ku Dhaqnaa G/waqooyi 1988-90kii | Marsa News
Qaybtii 8aad’ Ee Xog-warankii Yuusuf Garaad” Dhibkii Iyo Tacadigii Dawladii Siyaad Bare u Gaysatay Shacbigii Ku Dhaqnaa G/waqooyi 1988-90kii
March 25, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Tifaftirihii hore ee Laanta Afka Soomaaliga BBC-da iyo Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda xukuumadda Muqdisho Yuusuf Garaad, ayaa qoraallada taxanaha xusuus qorkiisa waxa uu maanta ku soo qaatay qormo uu si faahfaahsan ugaga hadlayo dhibkii iyo tacadigii nidaamkii dawladii siyaad bare ay kula kacday dadkii masaakiinta ahaa ee aan waxba galabsan balse loo gumaadayay hab isir nacayb ah balse yuusuf garaad ka waramaya waayihii iyo duruufihii qalafsanaa ee ku gadaana xiligaas magaalooyinka goboladii la odhan jiray waqooyiga somaliya haatana ah somalland, isagoo Qoraalkaasi oo uu ciwaan uga dhigay ‘Xadhig & Xabaal-Wadareed – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta 8aad oo u dhignayd sidan:
Marka laga soo tago saddexdaa magaalo ee jiho ahaan isugu beegan sida ku dhowaad xaglaha Saddex-xagal qumman, ma fileyn in aan arki doono dhib kale oo weyn oo woqooyi ka jira oo colaaddu ay u sabab tahay.
Dhowr jeer ayaan Awdal tegey sannadihii 1989 iyo 1990. Markii aan tagay xaaladdeedu ma wanaagsaneyn. Marnabana kama soo reyn muddadaas.
Garoon dayaaradeed oo aan laami la saarin ayaan ka soo nabad degnay. Dadkii hey’adda u shaqeynayay ee na soo doonay iyo kuwii dayaaradda raaci lahaa ayaan ugu nimid garoonka. Nin Soomaali ah oo waxaa halkaa taagan ay shaqadiisu tahay in mar kasta oo ay dayaarad soo degeyso ama ay kaceyso uu ku rooro dhabbaha dayaaradaha ilaa dhanka ugu dambeeya si uu xoolaha iyo dadkaba uga fogeeyo ugana ilaaliyo ilaa ay dayaaraddu soo degto ama ay kacdo.
Aniga oo galab la sheekeysanaya akhyaar reer Borame ah ayaa waxaa korkeenna isdaba joog uga dhacay qori aad u culus oo weligeey aanan maqal shanqartiisa argaggaxna wata. Raggii aan wadajoognay markiiba way dhaqaaqeen iyaga oo wejiyadoodu ay durba isbeddeleen. Mid ii warramay iyo laba is wareysatay ma jirin.
Nin ayaa hadal kala dhimman oo aan isku toosneyn igula hadlay waxaanan ka fahmay in isbitaalka ay raggii wada qabteen xataa ilaaladii guriga qaarkood. Isbitaalka ayaan aniguna aaday.
Waa baaq ay magaaladu isla taqaan in marka la maqlo Trenta Sette la isugu soo baxo barxadda Isbitaalka hortiisa ah. Waa saddex midkood – waa dhaawac la keenay, ama waa qeylo-dhaan gurmad-doon ah. Haddii kale waa sida galabta oo kale oo labaduba ay isla socdaan.
Habeenkaas waxaan Borame gudaheeda ku arkay gaari kuwa dagaalka ah oo cilladeysan. Nin makaanik ah ayaa habeenkaa ku dhafray oo ku shaqeynayay iftiinka tiriig ama mataramakis u shidnaa.
Markii aan ka soo laabannay ayaan nin weydiiyay dhallinyarada dagaalka u socday qaarkood qori ma sidan ee maxay u aadeen goobta? Wuxuu ii sheegay ragga qoryaha sita marka mid la dilo in qorigiisa la siin doono mid sacabbooleey ah.
Laakiin saaxiibkeey wuu iga diidi jiray sida aan arrinta u dhigayo. Isaga oo dooddiisu ay mar walba ahayd reer Awdal duullaan kuma aha SNM ee difaac ayay uga jiraan. SNM haddii aan dani ugu jirin in ay nala dagaallamaan heshiis kale uma baahna ee duullaanka uun ha naga daayeen. Annagu dhulna kuma haysanno, wax kalena uguma soconno.
Carada wejigiisa ka muuqatay iyo garaaca wadnihiisu xowliga uu ku socday oo neetfiisa laga dareemi karay ma ahayn kuwo saamaxaya in dood deggan lala geli karo.
Hadalka uu yirina waxaa uu inta markaas ah u markhaati furayay xaaladda aan dhex taagneyn. Waan ka gaabsaday oo Doodda lama sii wadin.